Balanqaadkii weynaa ee Barcelona ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo (qoraxda) | Cusbooneysiinta Cagaaran
Golaha Magaalada Barcelona ayaa ka shaqeynaya qeyb yar si kor loogu qaado tamarta qorraxda, iyadoo ujeedkeedu yahay in laba jibaar soo saarista korantada dowladda hoose laga dhaliyo tamarta la cusboonaysiin karo. iyadoo la rakibayo gaar ahaan saqafyada iyo saqafyada, sida lagu sheegay ku dhawaaqis Isniintii la soo dhaafay ku xigeenka Duqa Magaalada, Janet Sanz.
Shir jaraa'id oo uu la yeeshay Xildhibaanka Tamarta, Eloi Badia, Sanz wuxuu ku sharaxay taas magaalada Barcelona 12,4 xarumihii MWp ayaa shaqeynaya, halkaas oo kaliya 1,8 dhagaystayaashu ay yihiin dadweyne, kuwaas oo la filayo inay laba jibbaaraan 3,9. In kasta oo ay ku doodayaan in la kordhiyo awoodda gaarka loo leeyahay 10%, iyada oo ujeedadu tahay in magaaladu ka sarrayn karto 15 MWp inta lagu jiro muddadaas.
Qiyaasta, oo ay u qaadi doonaan guddiga deegaanka ee deegaanka toddobaadka soo socda, waxay qorsheyneysaa inay ku maal gasho 15 milyan labada ficil ee gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale rakibidda ka bilaabata wada shaqeynta dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, Badia ayaa sharaxday.
Golaha magaalada ayaa qorsheynaya maalgashi 12,3 milyan oo lagu rakibo goobaha dadweynaha, gaar ahaan toban dugsi, toban maktabadood, 18 xarumood iyo toban goobood oo dadweyne ah sida jardiinooyin, kuwaas oo ka fikiraya gelinta Maarso dabayaaqadii 2017 ama horraantii 2018.
1,3 milyan oo kale ayaa loogu talagalay mashaariicda si gaar ah looga fuliyay goobaha dadweynaha, taas oo u sahli doonta dharka ganacsiga iyada oo loo marayo tartan tanaasul ah 20 sano horeba iyada oo loo marayo Sharciga Masruufka maxaa yeelay waa dan guud »Iyadoo 35% laga dhimayo maalgashiga», wax xilligan la doonayo in lagu soo bandhigo shan goobood oo waaweyn, sida ku jirta xarumaha isboortiga ee degmada. Intaa waxaa sii dheer, waxaa lagu maalgelin doonaa tas-hiilaadka iyada oo loo marayo mashaariicda guud ee meelaha gaarka loo leeyahay, iyada oo lagu maalgelin doono 300.000 oo euro, meelaha sida saqafyada iyo kala qaybinta derbiyada dhismayaasha, wax suuragal ah u ballaadhi meelaha kale, sida uu sheegay xildhibaanka iyo duqa magaalada.
Si loo dhiiri geliyo maal gashiga gaarka loo leeyahay ee meelaha gaarka loo leeyahay, Golaha Magaalada ayaa habeyn doona habsami u socodka waxayna bixin doonaan gunno iyo kabid Canshuuraha sida Real Estate (IBI), Constructions, Installations and Works (ICIO) iyo Dhaqdhaqaaqa Dhaqaalaha (IAE) ", kaas oo qiyaastii 3,3 milyan oo yuuro loo qoondeyn doono. Badia waxay sharraxday inay markii hore sharad ku bixiyeen in isticmaalka tamarta la soo saaray ay tahay is-cunid degdeg ah, in kasta oo ay sidoo kale jirto ikhtiyaari ah in la iibiyo, ikhtiyaar ayaa ka badnaan doona inta lagu taliyay markii ay awoodda shaqayso. suuq koronto ee degmada oo ay dhiirrigelisay Dowladda Colau.
1 KOOXDA Tamarta
2 Golaha magaalada ee BCN wuxuu abuuraa suuqleyda ugu weyn Spain
Ujeeddadeedu waa in kor loo qaado madax-bannaanida loona dhaqaaqo dhanka kala-guurka tamarta “wax dhammaystiraya abuurista suuqgeeye » waxayna yareyneysaa saameynta deegaanka, maadaama ay horay u sii arkeen inay yareyneyso gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo 17% sanadka 2020 marka loo eego heerarkii 2008. Intaa waxaa dheer, Waxay damacsan yihiin inay xoojiyaan meertada dhaqaale ee maxalliga ah ee waaxdan isla markaana u muujiyaan in is-soo-saaridda ay waxtar leedahay, abuurista aaminaad iyo caadiyeynta isticmaalkeeda: «Waxaa muhiim ah in ficilladdu ay noo oggolaadaan inaan la dagaallano hadallada cabsida leh ee lagu rakibo dib-u-habeynta tamarta ee PP.
Sida laga soo xigtay Sanz «Waxaan dooneynaa inaan tusaale u noqono, oo aan ku sharraxno in tamarta la cusboonaysiin karo aysan ahayn waddo iskutallaabta qofna«. Waxay ku doodayaan in la soo saaro dhaqan tamar cusub iyadoo la wajihi karo "imika qaab aan cadaalad aheyn oo dhaliya sinaan la'aan" taasna waxay kuxirantahay shidaalka laga helo shidaalka iyo oligopoly ka oo xukuma ilaha tamarta. Sanz waa difaac adag oo cusbooneysiinta si loola dagaallamo isbeddelka cimilada iyo saboolnimada tamarta.
Marka hore waxay ahayd Cádiz hadana waa Barcelona. Caasimadda Catalan ayaa go'aansatay ku bixiso koronto dhaqameed waxayna leedahay suuq u gaar ah Tamarta dadweynaha ee degmada. Waxaa lagu magacaabaa Barcelona Energía waxayna kaliya heleysaa koronto laga soo saaro ilo dib loo cusboonaysiin karo. Golaha Magaalada ayaa ku qiyaasaya in iyada ay ku badbaadin doonto nus milyan euro sanadkii. Barcelona Energía waxay shaqeyn doontaa xagaaga 2018.
El Kal fadhigii guud ee golaha deegaanka ee magaalada Barcelona ayaa la ansixiyay jimcihii la soo dhaafay abuuritaanka Barcelona Energía oo taageero ka heleysa dhammaan kooxaha degmada, marka laga reebo PP, oo go'aansatay in laga fogaado. Suuqa cusub ayaa ku shaqeyn doona shirkadda dadweynaha Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa) waxayna noqon doontaa shirkadda ugu weyn 100% shirkadda korantada dadweynaha Spain.
Saadaalinta dowladda hoose ee duqa magaalada Ada Colau, ayaa loo tixgeliyay mudnaanta si loo abuuro shirkad tamarta dadweynaha ah (si loo joojiyo oligopolists, sida ay iyada tahay), taas ootaas oo macnaheedu noqon doono in la keydsado 500.000 euro oo lagu iibsanayo koronto. Marxaladda koowaad, suuqgeyntu waxay bixin doontaa tamarta la cusboonaysiin karo ee maxalliga ah iyo boqolkiiba boqol, iyadoo u adeegaysa 20.000 oo guri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Ballanqaadka weyn ee Barcelona ee 'tamarta qorraxda'
Dowladdu waxay yareyneysaa "khidmadaha" xaraashka xiga ee dib-u-cusboonaysiinta